“လှိုင် သာယာ မီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ (၁၇) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး”အကြောင်း – Zartiman
သေဆုံးခဲ့သည့် ဒေါ်….(၅၅)နှစ် နှင့် မ…(၁၇) နှစ်တို့အား ရွှေဥဒေါင်းလူမှု ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ ယာဉ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့ တင်ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းရာနေရာသို့ မီးသတ်ယာဉ် ၉ စီးနှင့် သန္ဓေတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈၁ ဦး၊ အရန်မီးသတ် ၄၃ ဦးဖြင့် ငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။မီးလောင်ကျွမ်းသည့် နေအိမ်မှာ ပေ ၂၀ ပေ ၆၀ ခြံအတွင်း ဆောက်ထားသည့် အာစီနှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီး ဘုရားစင်ပေါ်တွင် ဖယောင်း တိုင်ဖြင့် ဘုရားမီးပူဇော်ရာမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့မရဲစခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၈၅/၃၀၄-က ဖြင့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားအား အမှုဖွင့် ထားကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ လှိုင်း သာယာ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက် BOC မီးလောင်ဖြပွားခဲ့မှူ့ မှာသေဆုံးသွားတဲ့ ညီမ ငယ်လေးရှင်းသန့်ဖြူ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေကွယ် ။လှိုင် သာယာမြို့နယ်တွင် နေအိမ်တစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် မြေးအဘွား နှစ်ဦး သေဆုံးမှု ဇွန် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဇွန် ၁၂ ရက်၊ နံနက် ၅ နာရီခွဲကျော်ခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရသဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မီးလောင်မှုမှာ level 1 အဆင့်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါနေအိမ်ရှိ အသက် ၅၅ နှစ်နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတို့မှာ ရေချိုးခန်းအတွင်း မီးခိုးမွှန်ကာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးနဲ့ သူ့အဖွားတို့က သေဆုံးသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့အိမ်က လေဖြတ်နေတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ကိုလည်း လှိုင်သာယာထဲမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုသေဆုံးလဲတော့ မသိပါဘူး။ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေတော့ တွေ့ ပါတယ်” ဟု သေဆုံးသူနှစ်ဦးအား ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ရွှေဥဒေါင်း လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“လှိုငျ သာယာ မီးလောငျမှုမှာ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ (၁၇) နှဈအရှယျ မိနျးကလေး”အကွောငျး
သဆေုံးခဲ့သညျ့ ဒျေါ….(၅၅)နှဈ နှငျ့ မ…(၁၇) နှဈတို့အား ရှဥေဒေါငျးလူမှု ကူညီကယျဆယျရေးအသငျးမှ ယာဉျဖွငျ့ ဆေးရုံသို့ တငျဆောငျ ပေးခဲ့ပွီး မီးလောငျကြှမျးရာနရောသို့ မီးသတျယာဉျ ၉ စီးနှငျ့ သန်ဓတေပျဖှဲ့ဝငျ ၈၁ ဦး၊ အရနျမီးသတျ ၄၃ ဦးဖွငျ့ ငွိမျးသတျခဲ့ကွောငျး သိရ သညျ။မီးလောငျကြှမျးသညျ့ နအေိမျမှာ ပေ ၂၀ ပေ ၆၀ ခွံအတှငျး ဆောကျထားသညျ့ အာစီနှဈထပျအိမျဖွဈပွီး ဘုရားစငျပျေါတှငျ ဖယောငျး တိုငျဖွငျ့ ဘုရားမီးပူဇျောရာမှ စတငျလောငျကြှမျးခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး မီးသတျတပျဖှဲ့မှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျအား လှိုငျသာယာ (အနောကျပိုငျး) မွို့မရဲစခနျးမှ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၂၈၅/၃၀၄-က ဖွငျ့ အိမျရှငျအမြိုးသားအား အမှုဖှငျ့ ထားကွောငျး မီးသတျတပျဖှဲ့မှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။ လှိုငျး သာယာ အမှတျ ၉ ရပျကှကျ BOC မီးလောငျဖွပှားခဲ့မှူ့ မှာသဆေုံးသှားတဲ့ ညီမ ငယျလေးရှငျးသနျ့ဖွူ ကောငျးရာသုဂတိလားပါစကှေယျ ။လှိုငျ သာယာမွို့နယျတှငျ နအေိမျတဈလုံး မီးလောငျကြှမျးခဲ့သဖွငျ့ မွေးအဘှား နှဈဦး သဆေုံးမှု ဇှနျ ၁၂ ရကျ နံနကျပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
ဇှနျ ၁၂ ရကျ၊ နံနကျ ၅ နာရီခှဲကြျောခနျ့တှငျ လှိုငျသာယာမွို့နယျ၊ အမှတျ ၉ ရပျကှကျ၊ မိုးမခလမျးရှိ နအေိမျတဈအိမျတှငျ မီးလောငျကြှမျးမှု ဖွဈပှားကွောငျး သတငျးရသဖွငျ့ မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အခွားတာဝနျရှိသူမြား သှားရောကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။မီးလောငျမှုမှာ level 1 အဆငျ့ဖွဈသျောလညျး အဆိုပါနအေိမျရှိ အသကျ ၅၅ နှဈနှငျ့ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးတို့မှာ ရခြေိုးခနျးအတှငျး မီးခိုးမှနျကာ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
၁၇ နှဈအရှယျ ကောငျမလေးနဲ့ သူ့အဖှားတို့က သဆေုံးသှားပါတယျ။ ပွီးတော့ အဲ့အိမျက လဖွေတျနတေဲ့ အဘိုးတဈယောကျကိုလညျး လှိုငျသာယာထဲမှာရှိတဲ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့က ကယျထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဘယျလိုသဆေုံးလဲတော့ မသိပါဘူး။ မီးလောငျဒဏျရာတှတေော့ တှေ့ ပါတယျ” ဟု သဆေုံးသူနှဈဦးအား ဆေးရုံသို့ သယျဆောငျပေးခဲ့သညျ့ ရှဥေဒေါငျး လူမှုကူညီကယျဆယျရေးအသငျးမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
ကိုဗစ်ဒုတိယ လှိုင်းလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ စစ်တွေ မှာ နောက်ထပ် လူနာ (၁၀)ဦး ထပ်တွေ့ရာကွင်းဆက်ပြတ် (၅) ဦးပါဝင်နေ